Askari Ka Tirsan Ciidamada Dowladda oo Lagu Dilay Bakaaraha. – Shabakadda Amiirnuur
Askari Ka Tirsan Ciidamada Dowladda oo Lagu Dilay Bakaaraha.
November 23, 2017 10:52 am by admin Views: 99
Askari ka tirsan ciidamada dowladda federalka ah ayaa duhurnimadii maanta lagu dilay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in rag hubeysan oo aan heybtooda la garan ay toogteen askariga kadibna ay ka qaateen qorigii uu watay.
Askarigan ayaa kamid ahaa kuwa ka hawl gala suuqa Bakaaraha iyo agagaarkiisa, waxaana daqiiqado badan kadib dilkiisa goobta soo gaaray ciidamo gurmad ah oo careysan, kuwaasoo dad weynaha weydiiyay qorigii, qof walbana wuxuu sheegayay inuusan ka war qabin cidda dishay iyo qorigiisaba.
Dhacdooyinka noocan ee lagu ugaarsado dadka dowladda ka tirsan ayaa aad ugu badan magaalada Muqdisho. Dowladda ayaa waxay sameysay ciidamo loogu magac daray XASILINTA oo sideed bilood jirsaday, waxaana muuqanaysa in xaaladda ammaan ay kasii dareyso.